Yakasarudzika CNC Machining Service Service & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Isu tinopa akasiyana machining masevhisi anosanganisira kurova, kudhiraira, uye chamfering. Hengli Chikwata chine ruzivo rwekugadzirisa zvikamu zveCCC, zvikamu zvakagadzirwa neCCC, zvikamu zveCNC zvakashandurwa, uye zvakagadziriswa zvikamu zveCNC. Imwe-Stop CNC machining masevhisi anopihwa nemutungamiri wechikwata, akagadzirirwa yako ekuvandudza & ekugadzira mapurojekiti.
Yedu Machining Workshop ine vashandi vanosvika makumi manomwe, pane gumi neshanu eCCC machining nzvimbo, 6 seti dzeCNC yekuchera uye yekugogodza nzvimbo, 1 seti yeCNC yakatwasuka inofinha uye yekugaya muchina, uye zvakasiyana siyana zvemuchina michina: kusanganisira 8m yakareba lathe, 3 nemhando wekushanduka muchina, 9 anoita cnc lathe michina, 4 nemhando azvikuya michina.
Hengli Metal Processing ndeye chaiyo jira simbi yekugadzira kambani ine yakawedzera nyanzvi laser chubhu-yekucheka masevhisi anozvipira kuzadzisa zvese zvako zvetsika simbi zvinodiwa. Inoshanda kubvira 2002, kambani yedu inopa huwandu hwakazara hwekupedzisira-kusvika-kumagumo masevhisi anotangira kubva kuinjiniya dhizaini dhizaini, yekunyepedzera mutengo ongororo, prototyping, kugadzirwa uye kugadzirirwa kupihwa. Kushanda kwedu kunoitwa mune zviuru makumi mashanu sq. fekitori pamwe nekukombama, kuwelda, laser uye tube-laser yekucheka, kuungana uye kutumira zviteshi izvo zvakashongedzerwa zvakakwana neyemberi zvigadzirwa zvekugadzira pamusika uye zviripo pane-saiti. Seyakazara ISO yakasimbiswa kambani ine makore anopfuura 18+ ehunyanzvi ichipa chaiyo simbi yekugadzira masevhisi kune vatengi vedu kumba nekune dzimwe nyika, Hengli yakazvisimbisa semutungamiri weindasitiri anoongorora mutsika akagadzira ekupedzisira-magumo zvitoro zvigadziriso uye zvinoratidzira, isina simbi conveyors, magetsi emagetsi uye huwandu hwenzvimbo dzeindasitiri nekutengesa zvikamu.
Pashure: Laser Kucheka Service
Zvadaro: Logistic Center